Madaxweyne Al-Sisi oo ka hadlay heshiiskii Farmaajo iyo Kenyatta | Xaysimo
Home War Madaxweyne Al-Sisi oo ka hadlay heshiiskii Farmaajo iyo Kenyatta
Madaxweyne Al-Sisi oo ka hadlay heshiiskii Farmaajo iyo Kenyatta
Madaxweynaha Masar, Mudane Cabdifitaax Al-Sisi ayaa markii ugu horreysay ka hadlay heshiiskii ay dhowaan Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya ku gaareen gudaha magaalada Nairobi ee Caasimada dalkaasi.
Al-Sisi oo war qoraal ah soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa sheegay inuu soo dhoweynayo heshiiska Diplomaasiyadeed ee ay wada gaareen Madaxweynayaasha Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Farmaajo) iyo Madaxweyne Uhuru Kenyatta.
Sidoo kale wuxuu tilmaamay in uu muhiim yahay heshiiskaas, islamarkaana uu gobolka u horseedayo xasilooni, iskaashi iyo horumar.
“Waxaan muujinayaa in aan aad ugu faraxsanahay heshiiska ay Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya wada saxiixeen, kaas oo laysugu soo dhoweynayo xiriirkii iyo iskaashigii ka dhexeeyay labada Dowladood.”ayuu yiri Madaxweyne Cabdifitaax Al-Sisi.
Ugu dambeyn Madaxweyne, Al-Sisi ayaa carabka ku dhuftay in dowladdiisu ay garab taagnaan doonto sidii loo xoojin lahaa xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya.